ဂျေမီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျေမီ (အင်္ဂလိပ်: J-Me ) (၁၉၈၅-) သည် မြန်မာ ဟစ်ဟော့အဆိုရှင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်ဝန်းကျင်တွင် ဂီတခရီးစခဲ့ပြီး မြန်မာ့ မြေအောက်ဟစ်ဟော့လောက၏ ဥသျှောင်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ 
၁၉၈၅ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် အဆိုတော်များဖြစ်သည့် ဦးအောင်ကိုလတ် (James Patrick) နှင့် ဒေါ်တင်မိုးခိုင် (Marie Conway) တို့မှ မွေးသည်။ အမည်ရင်းမှာ ခန့်ဇင်ကို ဖြစ်သည်။ မီရှဲ (Michelle Anne Latt) ဟူသော အစ်မတစ်ယောက် ရှိသည်။
၁၀ တန်းအောင်ပြီးသည့် ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရဲလင်းအောင် (Bigg-Y) အပါအဝင် အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့် ဟစ်ဟော့သီးသန့်ဆိုရန် အားထုတ်သည်။ ဒေါက်တာဒရေ (Dr. Dre) ၏ ခရိုနစ် (The Chronic) စီးရီးက ဟစ်ဟော့ဆိုဖြစ်ရန် အဓိကအားဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ 
၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ မြေအောက်လောကဟု ဆိုရမည့် လမ်းများ၊ ပန်းခြံများရှိ ရက်ပ်ဆိုပွဲများသို့ တက်သည်။ ရဲလေးနှင့် တွဲထွက်သည့်အခွေတွင် လူသိများလာသည်။
ဇာရာနှင်းသွင် အားဖြည့်ဆိုသည့် သူ၏သီချင်း အောင်နိုင်ဖို့ရာ မွေးလာတာ (Born to Win) ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၃ အရှ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲများတွင် ဂုဏ်ပြုသီချင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။  နိုင်ငံအဆင့် အခမ်းအနားများတွင် ပထမဆုံး ရွေးချယ်ခံရသော ဟစ်ဟော့သီချင်း ဖြစ်သည်။
ဘဝရဲ့ နိဗ္ဗာန် တေးစီးရီးမှ Burn 'em Up ကို အမေရိကန်နှင့် ထိုင်းရှိ ရက်ပါများကပင် အသိအမှတ် ပြကြသည်။ ၂၀၁၄ တွင် ထွက်သည့် ဟာလေလုယာ (Hallelujah) သီချင်းမှာလည်း ကျော်ကြားသည်။
၂၀၁၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ဂျန်မောမေရီ (Jungmaw Mary) နှင့်လက်ထပ်သည်။ သားသမီး ၂ ဦး ရှိသည်။
ရဲလေး - ဂျေမီ ၂၀၀၇ ရဲလေး နှင့် တွဲ၍
ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ် ၂၀၀၇
ဘဝရဲ့ နိဗ္ဗာန် ၂၀၁၂
အမွေစား အမွေခံ ၂၀၁၆၊ မေ The Sun
↑ "A Master of Hip Hop". InDepth Magazine.9May 2015
↑ Joshua Hammer. "Myanmar's Yong Artists and Activists". Smithsonian Magazine. March 2011.
↑ Naomi Gingold, "This Burmese Rapper Sounds Straight Outta Compton, withaSwagger to Match". PRI. 18 Dec 2013.
↑ Aimee Lawrence, "J-Me: A Master of Ceremonies". Myanmore. 19 Jun 2015.
↑ Nathalie Johnston, "Myanmar Hip-Hop Meets the World". Myanmar Times. 29 July 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျေမီ&oldid=451934" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။